निषेशज्ञाको उल्लघन गर्दै बुद्धभुमिका मेयर श्रेष्ठ – मोफसल खबर
निषेशज्ञाको उल्लघन गर्दै बुद्धभुमिका मेयर श्रेष्ठ
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले प्रशासनले जारीको गरेको लकडाउन निषेधज्ञाको उल्लघन गरेको पाइएको छ । निषेधज्ञा लागु गर्ने गराउने पदमा रहेर आफै मेयरले नै निषेधज्ञाको उल्लघन गर्दा स्थानियमा कोरोनाको त्रास बढेको छ ।
नेपाली काँग्रेसबाट मेयर पदमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ कोरोनाका कारण भएको लकडाउनको समयमा भने कार्यकर्ता भर्तिमा व्यस्त रहेका छन । नेपाली काँग्रेसको महाधिबेशन नजिकिए सगै मेयर पार्टिमा कार्यकर्ता प्रवेश गराउनमा व्यस्त रहेका हुन । शनिबार बुद्धभूमि नगरपालिका १ चंघाटमा नेपाली काँग्रेस वडा इकाइ कमिटीले आयोजना गरेको पार्टि प्रवेश कार्यक्रममा नगर प्रमुख श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका थिए ।
कोभिड १९ कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा सरकारले भेला हुन, सभा सम्मेलन ,गोष्ठी कार्यक्रमहरु नगर्न निर्देशन गरेको भए पनि सरकारको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै मेयर श्रेष्ठ नै पार्टि प्रवेश कार्यक्रममा सहभागि भएको स्थानियले बताएका छन । सरकारको निर्देशनलाई पालन गराउनु पर्ने व्यक्तिले नै यसरी सभा सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि भएर सहभागि हुदाँ कोरोनाको त्रास अझ फैलिएको नाम नबताउन सर्तमा एक स्थानियले भने ।
चंघाटमा मेयर श्रेष्ठ सहभागी भएको कार्यक्रमा मानिस जुटाएर पार्टी प्रवेस गराएका हुन । निषेधाज्ञामा कार्यक्रम गर्न नपाइने भएपनी मेयर केशव कुमार श्रेष्ठ, वडा नं. १ वडा अध्यक्ष तिलक बस्नेत समेत सोहि कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी मेयर र वडा अध्यक्षले मास्क लगाएका छन् भने , अन्य अधिकांसले मास्क विना सहभागी भएका छन । स्रोतका अनुसार आइतवार विरपुरमा समेत मानिस जुटाएर कार्यक्रम गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
यस विषयमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने आफु नगर प्रमुखको हैसियतले नभई नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नं. २ को क्षेत्रिय सभापतिको हैसियतमा सहभागि भएको बताए । कार्यक्रममा भिड भाड नभएको र सामाजिक दुरी कायम गरी कार्यक्रम भएको उनले बताए । स्वास्थ्य सम्बन्धि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेको समेत उनले बताए । लकडाउनको बेला भेला सम्मेलन गर्न नपाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घनारायण पौडेलले बताए ।